Xubno Al-Shabaaba ka tirsan oo gacanta lagu soo dhigay | KEYDMEDIA ONLINE
Xubno Al-Shabaaba ka tirsan oo gacanta lagu soo dhigay
Ciidamada Nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM oo sheegay in ay gacanta kusoo dhigeen rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kaddib howl gal ay wada jir u sameeyeen iyaga iyo ciidamda xoogga dalka Soomaaliya.
JOWHAR, Soomaaliya - Ciidamada Nabad ilaalinta Midowga Afirka ee AMISOM iyo Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal wada jir ah oo ay sameeyeen waxay gacanta kusoo dhigeen xubno ka tirsan kooxda ka dagallanta Geeska Afrika ee Al-Shabaab.
"Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Africa ee AMISOM, qaybtooda Burundi ayaa gacanta ku dhigay tiro ka irsan kooxda Al-Shabaab kadib markii ay hawl-gal si wada-jir ah uga sameeyeen degaannada Golooley iyo Ceel-gelow oo hoos yimaada degmada Balcad ee gobalka Shabeellada Dhexe" ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo ay baahiyeen ciidamada Nabad ilaalinta.
AMISOM ayaa sheegtay in Xubnaha Al-Shabaab ee laspp qab-qabtay ay ku wareejiyeen Ciidanka Booliska Soomaaliya si ay baaritaan dheeri ah ugu sameeyaan.
Degaannada howlgalka laga sameeyay ee Gololey iyo Ceel-gelow ayaa bilihii u dambeeyay waxaa ka dhacay weeraro lagu dilay dad badan kuwaasoo loo adeegsaday miino lagu aasay waddada dhinaceeda, waxaana lagu qarxiyay halkaasi muddooyinkii u dambeeyay laba gaari oo mid kamida ahaa gaari shacab oo ay ku dhinteen ku dhawaad 15 ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen kaddib markii ay la qaraxday miino halkaas lagu aasay, sidoo kale waxaa iyana weerarka labaad lala beegsaday gaari ciidan oo halkaa marayay.